Manchester United Oo Tababare Jose Mourinho Ka Badbaadisay Ciqaab FA-gu Ku Ridi Lahaa – Cadalool.com
Manchester United Oo Tababare Jose Mourinho Ka Badbaadisay Ciqaab FA-gu Ku Ridi Lahaa
Tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester United ayaan waajihi doonin wax ciqaab ah oo uu xidhiidhka FA kusoo rogo, kaddib markii uu ku guuleystay rafcaan uu ka qaatay dacwad laga gudbiyey ciyaartii Newcastle United.
Mourinho ayaa lagu eedeeyey inuu sameeyey faallo iyo ficillo kasoo horjeeda dhaqanka cusub ciyaartii ay Manchester United 2-1 kaga adkaatay Newcastle horraantii bishii hore ee October.
Tababaraha ayaa ay kamarooyinku qabteen isaga oo saddex farood oo gacantiisa midig ah kor u taagaya, taas oo loo turjuntay inuu ujeeddo aflagaado xambaarsan ka lahaa, hase yeeshee kooxda kubadda cagta Manchester United ayaaa rafcaan ka qaadatay dacwaddaas, waxaanay ku guuleysatay in aan wax ciqaab ah lagu soo rogin.
Warbixin qoraal ah oo xidhiidhku soo saaray ayaa waxa lagu sheegay in dacwaddii ka dhanka ahayd Mourinho aan loo haynin wax caddayn ah, sidaas daraadeedna aan la ciqaabi doonin.
“Dacwad ka dhan ah Jose Mourinho oo ku saabsanayd isticmaalka luuqad bahdilaad/cay ama hab-dhaqan xun ah oo uu sameeyey, looma helin wax caddayn ah markii ay baadhitaan sameeyeen guddi madax-bannaan oo dhegaysatay.” Sidaas ayaa lagu yidhi bayaanka uu soo saaray xidhiidhka FA.
Si kastaba ha ahaatee Jose Mourinho ayaa mutaysan lahaa ganaax uu dibedda kaga ahaan lahaa dhawr ciyaarood haddii lagu heli lahaa kiiska lagu oogay.